Ciise Masiix wuxuu wax ku baray is cafintaa - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Surah Ghafir (Surah 40 – Is cafinta) waxay baraysaa in Eebbe dambi dhaafo
Ee dhaafa danbiga aqbalana toobadda, ayna darantahay ciqaabtiisu, ee nicmada badanleh, Eebe aan ilaahay ahayna ma jiro, xaggiisaana loo noqon Kuwa (Malaa’igta) xambaarsan carshiga iyo kuwa gaararkiisa ah waxay ku tasbiixsan kuna Mahadin Eebehood wayna rumeysanyihiin, waxayna u dambi dhaaf warsan kuwa rumeeyey iyagoo dhihi Eebahanow waxaad ugu waasac noqon wax kasta naxariis iyo ogaanshee u dambidhaaf kuwa toobadkeena ee raaca jidkaaga kana dhawr cadaabka jaxiimo.
Surah Ghafir 40: 3 & 7
Suuradda Al-Hujurat (Surah 49 – Rooms) waxay noo sheegaysaa inaan nabada ilaalino midba midka kale si aan u helno naxariis.
Mu’miniintu waa uun walaala, ee wanaajiya walaalihiin dhexdooda, Eebana ka dhawrsada, waxaad u dhawdihiin inuu idiin naxariistee.
Suuradda Al-Hujurat 49:10
Ciise masiix wuxuu baray wax ku saabsan Ilaah, wuxuuna sidoo kale ku xidhiidhinaya is cafinta m idba midkeen kale.
Isa al Masih cafiya dadka kale
Markaan daawado wararka adduunka waxay umuuqataa in dhiig daata iyo rabshadu ay ku sii kordhayaan adduunka oo dhan. Qaraxyada ka dhaca Afgaanistaan, dagaallada ka dhacaayo Lubnaan, Suuriya iyo Ciraaq, rabshadaha Masar, dilalka ka dhaca Pakistan, rabshadaha ka socda Turkiga, afduubka iskuulada ee Nigeria, dagaallada Falastiin iyo Israa’iil, magaalooyin lagu xasuuqay Kenya – kuwaasoo dhan waa waxaan maqlay oo aan arag anigoo raadinaya war xun. Intaas kor ku xusan waa denbiyo, dhaawacid iyo cabashooyinka aan isku qaadnay midba midka kale oo aan ka dhigin cinwaanno warar – laakiin si kastaba ha ahaatee na dhaawacaya. Maalintani aargudashada iyo aargoosiga, barida Ciise Masiix ee saamaxa waa cafis aad u weyn. Maalin maalmaha ka mid ah xertiisii ​​waxay weyddiiyeen inta jeer oo ay tahay inan is cafinaa. Waana sida kucad Injil:-
Sheekadii Addoonkii Aan naxariis laheyn
23 Sidaa darteed boqortooyada jannada waxaa loo ekaysiiyaa nin boqor ah oo doonayay inuu addoommadiisa ka xisaab qaato. 24 Goortuu bilaabay inuu xisaab qaato waxaa loo keenay nin toban kun oo [a]talanti uu ku lahaa. 25 Laakiin wuxuu ku bixiyo ma uu haysan. Markaasaa sayidkii wuxuu ku amray in la iibiyo isaga iyo naagtiisa iyo carruurtiisa iyo wuxuu lahaa oo dhan, oo lagu bixiyo.
26 Addoonkii haddaba wuu dhacay, oo intuu sujuuday, ayuu wuxuu ku yidhi, Ii dulqaado, anna waan wada bixin doonaaye. 27 Markaasaa addoonkaas sayidkiisii u naxariistay, wuuna sii daayay, oo amaahdii wuu u dhaafay.
30 Isaguse ma uu doonaynin, laakiin wuu baxay oo xabsiga ku tuuray ilaa uu bixiyo wixii lagu lahaa. 31 Haddaba kuwii la shaqayn jiray, goortay arkeen wixii dhacay, aad bay u calool xumaadeen, oo intay sayidkooda u yimaadeen, ayay u sheegeen wixii dhacay oo dhan. 32 Markaasaa sayidkiisii u yeedhay oo ku yidhi, Addoon yahow sharkaluhu! Waxaan kugu lahaa oo dhan waan kuu dhaafay, waayo, waad i bariday.
33 Miyaanad lahayn inaad kii kula shaqayn jiray u naxariisatid sidaan anigu kuugu naxariistay? 34 Markaasaa sayidkiisu cadhooday oo u dhiibay kuwa dadka silciya ilaa uu bixiyo wixii lagu lahaa oo dhan.
35 Sidaas oo kalena ayaa Aabbahayga jannada ku jiraa idinku samayn doonaa, haddaan midkiin waliba qalbiga ka cafiyin walaalkiis
Matayos 18: 21-35
Ujeeddada sheekadiisu waa haddii aan aqbalnay naxariistiisa, Ilaah (Boqorka) aad ayuu noo cafiyaa. Oo tanina waxaa lagu muujiyey tobanka kun oo kiish oo dahab ah oo uu addoonku lahaa. Addoonkii wuxuu caddeeyey inuu u baahan yahay waqti dheeri ah si dib loogu bixiyo. Laakiin taasi waa lacag aad iyo aad u weyn oo aan weligeed dib loo bixin, sidaa darteed Boqorka ayaa cafiyay deynta oo dhan. Tani waa waxa Eebbe noo sameeyo haddii aan helno naxariistiisa.
Laakiin isla addoonkaas wuxuu helay nin kale oo amaah ku lahaa boqol qalin oo lacag ah. Wuxuu dalbaday lacag oo dhan, mana siin doono addoonkii kale wakhti dheeri ah. Markaan iska cafino midba midka kale waxaa jira dhaawac iyo burbur, laakiin marka la barbar dhigo sida dembigeennu u murugooday oo u dhaawacay Eebe wax aan micno lahayn – sida 100 xabbo oo lacag ah marka loo eego toban kun oo jawaan dahab ah.
Markaa Boqorka (Ilaah) ka dib Adoonkii u diray xabsiga si uu u bixiyo wax walba. Wax baristan Ciise Masiix,ee ah in aan la cafiyin dembiyada iyo carada ay dadku nagu sameeyeen waa in aan iska cafinaa cafiska Allah oo aan naarta naloogu xukumin. Ma jiraan wax ka sii daran.
Caqabadda ayaa ah in la haysto ruuxa cafiska. Markuu qof wax na yeello rabitaanka aargudashada wuxuu noqon karaa mid aad u weyn. Marka sidee baan ku heli karnaa ruuxan cafinta? Waxaan u baahanahay inaan sii wadno sahaminta Injil.
Tags:barida isa al masihdhaawacaInjil la soo bandhigay Curyaamintaisa al masih iyo cafiskanaxariis allah